UTim Berners-Lee endalini ngekhodi yoqobo yomthombo www | Kusuka kuLinux
UTim Berners-Lee (Usosayensi waseBrithani wamakhompyutha nomsunguli weWebhu) izofaka endalini ikhodi yoqobo yomthombo we-www njengetokheni elingeyona ingozi (NFT). Ngakho-ke, lokhu kuzoba ngokokuqala ukuthi unqume ukusebenzisa imali ngokweqile kulokho okubhekwa njengenye yezinto ezisungulwe kakhulu esikhathini sethu.
Ngaphezu kwekhodi yomthombo, Incwadi evela kuBerners-Lee uqobo nayo izobe isendalini, ifayela le-vector elingaphrintwa kuposta, nevidiyo yemizuzu engama-30 ekhombisa ikhodi ebhalwe ngqo nguBerners-Lee.
Kulabo abangajwayele ama-NFTs, kufanele bazi ukuthi bawuhlobo lwefa ledijithali elenzelwe ukukhombisa ubunikazi bomuntu bento ethile eyingqayizivele, njengezithombe namavidiyo aku-inthanethi.
Ngenkathi bekhona isikhashana, amathokheni angenakonakala (ama-NFTs ngamafuphi) aqala ukuthola ukudonsa ekuqaleni kukaMashi walo nyaka. Lokhu kungemuva kokuba indlu yendali kaChristie ithengise umsebenzi wobuciko weNFT (ikholaji yezithombe ngumdwebi wedijithali uBeeple) kwathi kungekudala, kwaba nguJack Dorsey, inhloko yeTwitter, owathengisa i-tweet yakhe yokuqala ngo- $ 2.9 million.
Indali ikhodi yangempela yomthombo wewebhu, enesihloko "Lokhu kushintshe konke" kuzokwenzeka eLondon kusuka ngoJuni 23 kuya ku-30, ngezindali eziqala ku- $ 1,000. Izophathwa yiSotheby's, indlu yendali yamazwe ngamazwe aseBrithani-American yemisebenzi yobuciko kanye nokuqoqwa. Ngokusho koSuthu, imali etholakala ngale ndali izohlomulisa izinhlelo uBerners-Lee nomkakhe abazokweseka.
I-NFT ifaka amafayili wesitembu esinesikhathi sokuqala aqukethe:
Ingobo yomlando yamafayela anosuku nesikhathi equkethe ikhodi yomthombo, ebhalwe phakathi kuka-Okthoba 3, 1990 no-Agasti 24, 1991. Lawa mafayela aqukethe ikhodi enemigqa ecishe ibe ngu-9.555 XNUMX, okuqukethwe okubandakanya ukusetshenziswa kwezilimi ezintathu nezinqubo ezilandelwayo Mnumzane Tim; I-HTML (Ulimi Lokumakwa Kwekhiphethi); I-HTTP ne-URI, kanye nemibhalo yangempela ye-HTML eyale abasebenzisi bokuqala bewebhu ukuthi bangalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza.
Ukubukwa okugqwayizayo kwekhodi ebhalwayo (ividiyo, emnyama nokumhlophe, ukuthula), okunesikhathi semizuzu engama-30 namasekhondi angu-25.
Isethulo se-Scalable Vector Graphics (SVG) sekhodi ephelele (eyi-A0 841mm ububanzi nge-1189mm ubude), eyenziwe nguSir Tim evela kumafayili okuqala asebenzisa iPython, enesithombe esifanekisayo sesiginesha yayo ebonakalayo ngezansi kwesokudla
Incwadi ebhalwe kufayela le-README.md (ngefomethi "yokumaka") ebhalwe nguSir Tim ngoJuni 2021, ekhombisa ikhodi kanye nenqubo yokudala.
Amafayela akhonjwe yi-NFT aqukethe ikhodi yemigqa ecishe ibe yi-9.555, kuchaza uSotheby.
UTim Berners-Lee ubhale isicelo ngolimi lwezinhloso ze-Objective C futhi wasebenzisa ikhompyutha Elandelayo ukuze akwenze.
Futhi yilokho kungaba namakhophi amaningi "angenamkhawulo" wento yedijithali, kodwa eyodwa kuphela ene-NFT eyodwa. Lokhu kwehlukile kunganikeza inani lomqoqi wento, njengesitembu esivamile esine -print engavamile.
Ikhodi yomthombo ethengiswa endalini manje sekuzoba ukuphela kwekhophi esayiniwe yekhodi yomthombo yesiphequluli sokuqala emhlabeni. Ngalowo mqondo, into ihluke ngokuphelele. Lokhu kuzoba ngokokuqala ngqa lapho uBerners-Lee ezongenisa ngokwezimali kulokho okubhekwa njengesinye sezinto ezinkulu ezisungulwe esikhathini sethu.
"Emashumini amathathu edlule, ngidale okuthile okwathi, ngosizo olulandelayo lwabahlanganyeli abaningi emhlabeni jikelele, kwaba yithuluzi elinamandla esintwini," kusho uBerners-Lee esitatimendeni sokuphawula. “Kimina, into ehamba phambili ngewebhu kube umoya wokubambisana.
Yize ngingenzi izibikezelo ngekusasa, ngethemba ngobuqotho ukuthi ukusetshenziswa kwalo, ulwazi namandla alo angahlala evulekile futhi atholakale kithi sonke ukusivumela ukuthi siqhubeke nokwenza izinto ezintsha, sakhe futhi siqalise uguquko olulandelayo lobuchwepheshe, esingenakukucabanga okwamanje. «
“Ama-NFTs, noma ngabe ayimisebenzi yobuciko noma i-digital artifact enjengale, ayizidalwa zakamuva ezidlalayo emhlabeni wewebhu futhi ingumthombo ofanele kakhulu wokuthengisa okhona. UTim Berners-Lee ukholelwa ukuthi "le yindlela enhle yokupakisha umsuka weWebhu." »Ingabe uzophumelela endalini yerekhodi esimweni samanje sokuwa kwemakethe yeNFT?
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngakho, ungaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » UTim Berners-Lee uthengisa ikhodi yangempela yomthombo www
I-Amazon nayo ijoyina ukuvinjelwa kweFLC